Raayyaa: Walitti bu’insa Allaamaxaatti uumameen namootni shan ajjeefaman – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioRaayyaa: Walitti bu’insa Allaamaxaatti uumameen namootni shan ajjeefaman
Akkam ooltan! Sagantaan BBC Afaan Oromoo eegale. Nu caqasaa!
Kaartaa naannoo Tigiya fi Amaaraa agarsiisu
Kaleessa magaalaa Allaamaaxaatti humna nageenyaa hidhatee fi dargaggoota gidduutti waliiti bu’insa uumameen namootni shan rasaasaan ajjeefamuu namootni ijaan argan dubbatu.
(bbcafaanoromoo)—Ji’oota muraasa dura irraa eegaluun dargaggoonni magaalittii gaaffii eenyummaa waliin wal qabatu kaasaa akka turan jirattotni himaniiru.
Obbo Zinaabuu Marfee jiraataa magaalittii yoo tahan hiriira kaleessa gaggeefame keessatti hirmaataniiru.
Obbo Zinaabuun yeroo hiriira bahan akka reebaman himuun, ji’oota sadiin as dargaggootni magaalittii waraqaa bittinsuun hirira bahuuf yaalii gochaa turuu himaniiru.
”T-Shirt jijjiramicha ni deeggarra jedhu uffatu, kanumaan hidhamaa fi hiikamaa turan inni kaleessaa garuu hammaataa ture” jedhan.
”Ji’a lamaaf dheebuu keessa jirra,” jiraattota Harar
Tarkaanfiin koree giddu galeessaa ABUT maal hima?
Kaleessa hiriirri mormii dirree kubbaa saaphanaa irratti jalqabe badinsa lubbuu namootaaf sababa taheera. Jiraattotni magaalittii akka jedhanitti yoo tahe dargaggoonni walitti qabamuun hiriira bahuu hin dandeessan jedhaman qaama nageenyaa waliin walitti bu’aniiru.
Namni biraan nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka hin dhahamne barbaadu ammoo rasaasaan rukutamuu dubbata. Ani mucaa kaasuu dhaqeen rasaasaan rukutame” jedhe.
”Rasaasaan rukutamuu koo illee hin arginen ture, namoota naannoo koo turantu maqaakoon na waamee natti hime,” jedhe.
Dargaggoon kun yeroo dargaggoonni walitti qabaman bittinsuuf humni nageenyaa yeroo yaalii godhu walitti bu’insichi uumamuu hime.
Innis gara mana yaalaa dhuunfaa deemuun erga yaalii argatee manasaa akka jiru dubbate.
Obbo Zinaabuun loltootni raayyaa itisa biyyaallee achi gahanii nageenya uummataa garuu eegsisuun ‘itti cimeera’ jedhan.
”Humni addaa miidhaa geesisaa jiru akka dhaabsisan yommuu gaafannu nuyi karaa bansiisuu qofa dandeenya nuun jedhan” jedhu.
Obbo Zinaabuu Marfee akka jedhanitti namootni shan ajjeefamuun 15 kan tahan irra ammoo miidhaa cimaa fi salphaan gaheera. Namootni 50 tahan ammoo hidhamaniiru jedhan.
Walitti qabaan koreen dhimma eenyummaa deebisuuf hojjetuu Aagizee Hidaaruu lakkoofsi namoota ajjefamanii sagal yoo tahu miidhamtootni ammoo 16 tahu jedheera.
Namni biraa maqaansaa akka dhahamu hin feene fi hospitaala Allaamaaxaa keessa hojjetu ammoo namootni miidhamanii yaalii argataa jiran 25 yoo tahu namni tokko ammoo miidhaa guddaan waan irra gaheef yaalii dabalataaf gara hospitaala Maqaleetti ergameera jedhan.
Addi Bilisa Baasaa Tigiraay yaa’ii jalqabe
Allaamaaxaa barfata har’aa
Obbo Zinaabuu fi namootni dubbisne biroo akka jedhanitti daandiin magaalaa keessaa cufaadha. Humni raayyaa ittisa biyyaas daandii bansiisuuf yaalii gochaa ture jedhan.
Sirni awwaalchaa namoota ajjefaman lamaa magaalaa Allaamaaxaa keessatti kan namoota sadii ammoo gara bakka dhaloota isaanii magaalaa alatti geeffamuun raawwateera jedhan.
Walitti qabaan koree gaaffii eenyummaa deebistuu Obbo Aagizee Hidaaruu ji’oota sadiin as gaaffii eenyummaa karaa nagaa dhiyeessa turanillee mootummaan naannoo Tigiraay garuu humna poolisii addaa naannichatti bobbaasuun gaafficha ukkaamsuun dargaggoota irra miidhaa guddaa geessisaa turuu BBCti himan.
Dabalataan Raayyaa Azeeboo, raayyaa Allaamaaxaa, fi Ooflaan aanolee gaaffileen eenyummaa keessatti ka’aa turedha jedhan.
Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Tigiraay fuula feesbuukii isaanii irratti, ” gaaffii eenyummaa uummataa fakkeessuun bu’aa siyaasaa biraa argachuuf fiigichi gaggeessan madaallii kamiin iyyuu fudhatama hin qabu” jechuun dhimmicha balaallefataniiru.
”Osoo kun hin xiqqaatiin ammoo nageenya lammiilee fi tasgabbii isaanii eeguuf qaama bobba’e waliin kakaasanii walitti buusuun akka tarkaanfii fudhatan gochuun ammoo gochaa gonkumaa irra deebi’amuu hin qabne dha,” jechuun ibsa isaanii keessatti eeraniiru.
Dabalataan mootummaan kallattiinis tahe al kallattiin namoota gochicha keessaa harka qaban callisee akka hin dhiisne beeksiseera.
Mana Maree Bakka Buutotaa Ummataa Tigiraay keessatti bakka buutuu uummata aanichaa kan tahan aadde Jaanoo Nigus ammoo, ”nuyi Tigiraayis, Amaaras miti” kan jedhan jiru. Gochaan kun uummata gaaffii haqaa fi bulchiinsa gaarii qabu walitti buusuuf kan raawwatedha jedhan.
Gaaffiin akkanaa kun karaa seera qabeessa taheen gaafatamuu qabas jedhaniiru.
Great documentary on Raya
Nuu tuttuqinaa tuttuqxaan ofii nuu kasinaa Raayyaa oromoo yommu eenyuummaa isaan irraa dhiiquu hin dandeesan!ወደዳቸውም ጠላችሁም ራያ የማይቀየር ኦሮሞ ነው ።
“Hattuun waliin hattee qoodana irratti wal lolti” jedhanii.
Raayyaan Oromoodha hin dhama’inaa seenaan yeroo isaa eege galchaa
Good advice for ESAT Jurnalists : Mental tensions, frustrations, insecurity, aimlessness are among the most damaging stressors,